Jesus Fellowship Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Ezekiel 45
Nepali New Revised Version, Ezekiel 45
1 “ ‘जब तिमीहरूले उत्तराधिकारको निम्‍ति देश बाँड़ेर दिन्‍छौ, तब तिमीहरूले त्‍यसबाट परमप्रभुको निम्‍ति २५,००० हात लामो र २०,००० हात चौड़ा भएको एक भाग पवित्र जिल्‍ला हुनलाई अलगै उपहार दिनू। त्‍यो जम्‍मै क्षेत्र पवित्र हुनेछ।
2 यसबाट लमाइ र चौड़ाइ दुवै ५०० हात भएको एउटा भाग पवित्रस्‍थानको निम्‍ति हुनेछ। त्‍यसका चारैतिर पचास हात चौड़ा एउटा खुला ठाउँ होस्‌।
3 त्‍यही पवित्र जिल्‍लामा २५,००० हात* लामो र १०,००० हात* चौड़ा एउटा ठाउँ नाप्‍नू। त्‍यहाँ पवित्रस्‍थान र महा-पवित्रस्‍थान हुनेछन्‌।
4 यो ठाउँचाहिँ पवित्रस्‍थानमा परमप्रभुको सेवा गर्दा परमप्रभुको नजिक आउने पूजाहारीहरूका निम्‍ति देशको एउटा पवित्र भाग होस्‌। यो तिनीहरूका घरहरूका निम्‍ति जग्‍गा र पवित्रस्‍थानको निम्‍ति पनि एउटा पवित्र ठाउँ हुनेछन्‌।
5 २५,००० हात लामो र १०,००० हात चौड़ा भएको एउटा क्षेत्र मन्‍दिरको सेवा गर्ने लेवीहरूको हुनेछ। त्‍यो तिनीहरू बस्‍ने नगरहरूका निम्‍ति एउटा निजी अधिकार हुनेछन्‌।
6 “ ‘तिमीहरूले ५,००० हात चौड़ा र २५,००० हात लामो भएको, र पवित्र भागको छेउमा भएको एउटा क्षेत्र सहरलाई त्‍यसको जग्‍गाजमिनको रूपमा दिनू। योचाहिँ इस्राएलको सारा घरानाको निम्‍ति हुनेछ।
7 पवित्र जिल्‍ला र सहरको जग्‍गाजमिनका हरेक किनारको जमिनचाहिँ राजकुमारको हुनेछ। त्‍यो पश्‍चिमपट्टिबाट पश्‍चिमतिरै र पूर्वपट्टिबाट पूर्वतिरै फैलेको हुनेछ। कुल-कुलका भागहरूमध्‍ये एउटाको समानान्‍तर भएर पश्‍चिम सिमानादेखि पूर्व सिमानासम्‍म फैलिएर गएको तिनको भाग हुनेछ।
8 यो जग्‍गाचाहिँ इस्राएलमा तिनको निजी अधिकार हुनेछ। अनि मेरा राजकुमारहरूले मेरो प्रजालाई फेरि कहिल्‍यै अत्‍याचार गर्नेछैनन्‌, तर तिनीहरूले इस्राएलका घरानालाई तिनीहरूका कुल-कुलअनुसार जग्‍गाजमिन अधिकार गर्नलाई अनुमति दिनेछन्‌।
9 “ ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: हे इस्राएलका राजकुमार हो! बस, तिमीहरूले अति नै गर्‍यौ! तिमीहरूका उपद्रव र अत्‍याचार त्‍यागिदेओ, र जो न्‍यायसङ्गत र ठीक छ त्‍यही गर। आफ्‍नो अधिकारको ठाउँबाट मेरो प्रजालाई निष्‍कासन गर्न छोड़िदेओ, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ।
10 तिमीहरूले ठीक-ठीक तौलका ढक र तराजू प्रयोग गर्नुपर्छ। तिमीहरूका एपा* र बाथ* पनि ठीक-ठीक नापका होऊन्‌।
11 एपा र बाथका नाप एकसमान होस्‌, अर्थात्‌ होमेरको* दशांश भाग। दुवैको लागि होमेरचाहिँ सैद्धान्‍तिक नाप होस्‌।
12 तिमीहरूका शेकेलको* तौल बीस गेराको होस्‌। दश, पच्‍चीस र पन्‍ध्र शेकेल जोड़ेर तिमीहरूको मीना होस्‌।
13 “ ‘तिमीहरूले चढ़ाउनुपर्ने विशेष भेटी यही हो: गहूँ र जौको हरेक होमेरबाट एपाको छैटौँ भाग।
14 तेलको निम्‍ति तोकिएको हिस्‍साचाहिँ हरेक कोरबाट बाथको दशौँ भाग हो। (एक कोरमा दश बाथ, अर्थात्‌ एक होमेर हुन्‍छ।)
15 इस्राएलका खर्कहरूमा राम्रो दाना-पानी पाएका हरेक दुई सय बगालबाट एउटा भेड़ो लिइओस्‌। मानिसहरूका लागि प्रायश्‍चित गर्नलाई अन्‍नबलि, होमबलि र मेलबलिको निम्‍ति यी प्रयोग गरून्‌, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ।
16 इस्राएलमा राजकुमारले प्रयोग गरिने विशेष उपहारमा देशका सबै मानिसहरूले भाग लिनेछन्‌।
17 विभिन्‍न चाड़हरू, औंसीका चाड़हरू, शबाथ-दिनहरू– अर्थात्‌ इस्राएलका घरानाका सबै तोकिएका चाड़हरूमा चढ़ाउनलाई होमबलि, अन्‍नबलि र अर्घ-बलि जुटाइदिने कर्तव्‍य राजकुमारको नै हुनेछ। इस्राएलका घरानाको निम्‍ति प्रायश्‍चित गर्नलाई चाहिने पापबलि, अन्‍नबलि, होमबलि र मेलबलिहरू तिनले नै जुटाउनुपर्नेछ।
18 “ ‘परमप्रभु परमेश्‍वर यसो भन्‍नुहुन्‍छ: ‘पहिलो महिनाको पहिलो दिनमा तिमीहरूले एउटा निष्‍खोट बाछो लिएर पवित्रस्‍थानलाई शुद्ध गर्नुपर्छ।
19 पूजाहारीले पापबलिको केही रगत लिएर मन्‍दिरका ढोकाका खामाहरू, वेदीको माथिल्‍लो बिटका चारै कुनाहरू र भित्री चोकका ढोकाका खामाहरूमा लगाउनुपर्छ।
20 कसैले विचार नगरीकन अथवा अजानमा पाप गरेको छ भने, महिनाको सातौँ दिनमा तिमीहरूले त्‍यसै गर्नुपर्छ। यसरी मन्‍दिरको निम्‍ति तिमीहरूले प्रायश्‍चित गर्नुपर्छ।
21 “ ‘पहिलो महिनाको चौधौँ दिनमा तिमीहरूले सात दिनसम्‍म मानिने निस्‍तार-चाड़ मान्‍नुपर्छ। त्‍यस बेला तिमीहरूले अखमिरी रोटी खानुपर्छ।
22 त्‍यस दिन राजकुमारले आफ्‍नो निम्‍ति र देशका सबै मानिसहरूका निम्‍ति पापबलिको लागि एउटा साँढ़े जुटाउनुपर्छ।
23 चाड़का सातै दिनसम्‍म तिनले दिनहुँ परमप्रभुको निम्‍ति सात वटा निष्‍खोट साँढ़े र सात वटा निष्‍खोट भेड़ा होमबलि गरी र दिनहुँ एउटा-एउटा बोका पापबलि गरी चढ़ाउनुपर्छ।
24 हरेक साँढ़े र भेड़ाको साथ तिनले एक एपा अन्‍नबलि स्‍वरूप चढ़ाउनुपर्छ, र हरेक एपाको साथ एक हीन तेल चढ़ाउनुपर्छ।
25 “ ‘सातौँ महिनाको पन्‍ध्रौँ दिनदेखि लिएर सात दिनसम्‍म तिनले पापबलि, होमबलि र अन्‍नबलिका निम्‍ति त्‍यही थोक जुटाउनुपर्छ’।”
Ezekiel 44 Choose Book & Chapter Ezekiel 46